Isazisi sePUBG sokuHamba ngokuHamba 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
LD I-PUBG yeselfowuni yokuGqibela
Iintshaba zinokukhathazeka ngakumbi ngoku ukuba unathi!
Ukufumana okona kulungileyo PUBG Isoftware hacks enokuthengwa, apha kwi Gamepron
Ngamanye amaxesha kuya kufuneka uzibophelele ixesha elide! Thenga isitshixo semveliso yeveki e-1 namhlanje
Yiba lilungu leWinThatWar PUBG Usapho oluselfowuni ngokuthenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Sebenzisa i-PUBG Mobile LD Emulator ikunika ukufikelela kwiimpawu ongazange ucinge ukuba zinokwenzeka ngelixa udlala iPUBG Mobile. Ungasebenzisa i-Aimbot ye-stellar eya kuthatha ezantsi iintshaba ngesantya, okanye iRadar ekugcina uqaphele!
Ulwazi lwe-PUBG yesiphelo seLD
Fumana isandla esiphakamileyo nokuba udlala nabani kwiPUBG Mobile! Sebenzisa i-PUBG Mobile Emulator LD hack ukudiliza nabaphikisi abanobuganga bokuma endleleni yakho, njengoko esi sixhobo sibandakanya yonke into efunekayo ukuze silawule kwi-PUBG. Ukuphumelela umdlalo we-royale wedabi kunzima ngokwaneleyo njengoko kunjalo, kodwa xa uphosa abadlali abanamava kunye nokuphanga okungenamsebenzi kumxube, kwenza izinto zibe nzima nangakumbi. Kungenxa yoko le nto ukusebenzisa kwethu iPUBG ye-Emulator LD ukukopela kuya kungqineka kuyeyona nto intle ukhe wayenza, njengoko "ubungqina bukupudding"!
Khetha kwiindlela ezahlukeneyo ze-ESP (kubandakanya zombini into kunye noMdlali we-ESP), fumana amaqhinga amatsha usebenzisa i-PUBG Mobile aimbot enesimo esipheleleyo (esine-hold / auto-lock kunye nenjongo egudileyo), kunye nezinye izinto ezintle. Musa ukuxhomekeka kokungahleliwe ukuze ufumane i "dub" kwaye usebenzise i-PUBG Mobile Emulator LD endaweni yoko!
Malunga ne-PUBG ye-Emulator ye-Mobile LD
Ukufezekisa kwabo basebenzisayo Windows 10 okanye bhetele, le mpazamo yaphuhliswa ukuxhasa ii-Intel / AMD CPU's (ngelixa ikwaxhasa i-Nvidia kunye ne-AMD GPUs). Iza ngesiNgesi kuphela kwaye ngelixa izakube itshixiwe i-HWID, ungasebenzisa i-HWID Spoofer eza ecaleni kwale PUBG ukukopela ukuqinisekisa ukuba uyakwazi ukudlala. Iimpawu ze-aimbot zinokukhetha izinto ezininzi ezinokuqwalaselwa, ngenxa yoko uya kwenza ukuba amava akho ashiyeke njengangaphambili apha eWinThatWar!
Imowudi yethu yeAim Bone Selector iya kukuvumela ukuba ujolise kwindawo ezithile zomzimba weqela elichasayo, kwaye umsebenzi weLoot ESP uya kwenza ukuba eyona mipu ilula ibe yinkqubo elula.
Kutheni usebenzisa i-PUBG Mobile Emulator LD ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Abanye ababoneleli abasoloko besenza konke okusemandleni abo xa kuziwa kuphuhliso lwezixhobo, okanye nokusebenza nje kunye namaqabane athembekileyo agxile ekugcineni umgangatho. Nangona kunjalo ucwangcisa ukusondela kwi-PUBG Mobile hack yakho, khumbula nje ukuba iWinThatWar yahluke kakhulu kunomboneleli wakho wemveli wokuqhekeza. Ezi nkampani zihlala zigxila ekwenzeni imali kwaye azikhathali kakhulu malunga nomgangatho wokukhutshwa kwazo, kodwa iWinThatWar ichasene naloo nto. Awusoze udlale ngemali xa uthenga i-cheats kwi-WinThatWar, yiyo loo nto abasebenzisi behlala bebuya befuna okungakumbi-senza umsebenzi wenziwe ngokufanelekileyo!
Abagculi banokuvuya, njengoko iWinTHatWar ekugqibeleni ikwazile ukunxibelelana nabantu ngokukhohlisa okuthembekileyo kwePUBG. Zininzi iindlela onokukhetha kuzo kwi-intanethi kwaye kunokuba nzima ukubona eyona ilungileyo ngamanye amaxesha, kodwa iWinThatWar inokuphuma kwipakethi kunye nemenyu yethu yomdlalo. Ezinye i-PUBG Mobile cheats ziya kukunyanzela ukuba uvale umdlalo wakho ngaphambi kokwenza utshintsho, kodwa ngeWinThatWar kwimidlalo yomdlalo, uhlengahlengiso kunye nokulungelelanisa kubhabho yimpepho. Yenza uhlengahlengiso kwisantya okanye kwindawo ekujolise kuyo kwi-PUBG aimbot yakho, kwaye ufumane nokuba yeyiphi na i-ESP (eyongezelelweyo yokuqonda okuPheleleyo) ofuna ukuyivula!
Zombini iziqwengana ezinamava kunye nezinamava zinokuxhamla kwizixhobo zethu, konke ekufuneka ukwenzile kukuthenga isitshixo semveliso kwaye unokukhuphela i-PUBG Mobile LD Emulator kwangoko.
Le yindawo efanelekileyo yokoyisa ukhuphiswano, ke makhe siqale namhlanje!
Ilindelwe Lawula kunye ne-PUBG Mobile Emulator LD Hack?
I-Hack yeVerantant nguHoplit